नेपाली यौन कथा अनलाईन : मेरो पहीलो चिकाई
मेरो पहीलो चिकाई
'मलाई मजा चाहिएको छैन ,' मेरो जवाफ थियो । 'ओहो तिमी त जहिल्यै पनि भर्जिन कै जस्तो कुरा गर्र्छौ बा ।' उसले यति नभन्दै मलाई खाटमा पल्टायो । अनि ममाथि मडारिन थाल्यो । मेरा खुट्टालाई आफ्ना खुट्टाले बाँधेर मलाई बेस्सरी थिचिरहेको थियो । मेरा स्तनमा घरीघरी हात ल्याउँथ्यो र निचोर्थ्यो । अचानक ऊ घुँडा टेकेर बस्यो । अनि मलाई एक नजरले हेर्यो । ऊ जोशले जागिसकेको राक्षस जस्तो भइसकेको थियो । उसको अनुहार रातो भइसकेको थियो । फटाफट उसले मेरा लुगा खोल्दै भुइँतिर फाल्न थाल्यो । मलाई नांगो बनाउन उसलाई एक मिनेट पनि लागेन होला । अनि मेरो खुट्टा फट्याएर पुती नियाँल्न थाल्यो । हातले केही बेर चलायो । मलाई काउकुती लाग्यो । हत्केलाले पुती निकैबेर रगड्यो । कहिले भुत्ला चलाउने, कहिले पुतीको डिलमा औला दल्ने, कहिले औंला पसाउन खोज्ने गर्दै निकैबेर उसले खेलायो । म आँखा चिम्लिएर उसका स्मर्शलाई स्वीकार्दै गएँ । एकछिन ऊ शान्त भएझै लाग्यो । तर मैले आँखा खोलिनँ । केहीबेरमा उसले मेरा दुबै हात समात्यो । त्यतिन्जेल मेरो ओठतिर उसले लाडो ल्याइपुर्याइसकेको रहेछ । मैले आँखा खोलेँ । लमतन्न उसको लाडो पसारिएको थियो । अनि उसले मेरो ओठमा दल्न थाल्यो । मलाई घिन लाग्यो र मुन्टो अर्कातिर फर्काएँ । मेरो चिउँडो समातेर उसले लाडो दल्न थाल्यो । 'यो के गरेको ?' मैले भनेँ । 'यसलाई माया गर न लाटी ।' उसले छिल्लीदैं भन्यो ।
म हैरान हुँदै गएँ । उसले मलाई जुरुक्क उठायो र काखमा राख्यो । उसको लाडोमाथि मेरो चाक परेको थियो । लाडो जुर्मुराएको स्पष्ट अनुभव मैले गरिरहेकी थिएँ । ऊ चाहीँ मेरो काखीमुनीबाट हात छिराएर मेरा दुबै स्तन च्याप्प समातेर बसेको थियो । स्तनको मुन्टो खेलाउँदा मलाई खुब काउकुती लाग्थ्यो । उसले आफ्नो छातीमा मेरो ढाड टाँसेको थियो । मैले उसको शरीरको ताप महसुस गरेँ ।
अचानक मलाई घोप्टो पार्यो । अनि मेरो शरीरमा ऊ लम्पसार भयो । चाकको चेपमा उसले लाडो दल्न सुरु गर्यो । मरो जिउ नै सिरिंग भयो । यत्तिकैमा मेरो चाक फट्याएर उसले नियाँल्यो । अनि प्वालमा मुखभरीको थुक खसाल्यो । अनि आफ्नो औंलाले चलाउन सुरु गर्यो । म डराएँ । यो पागलबाट कसरी छुट्कारा पाउने भन्ने चिन्ताले छट्पटाएँ ।
तुरन्तै मेरो मुखबाट निस्कियो, 'नाइ..पर्दैन । ''त्यसो भए हातले खेलाउ न त ।' बरु त्यही ठिक लाग्यो र समाइदिएँ । निकै कडा हुँदो रहेछ । च्याप्प मुठीमा कसेँ । एक पटक त निमोठिदिउँजस्तो पनि लाग्यो । केही बेरमा उसले मलाई उत्तानो पारेर सुतायो अनि आफ्ना काँधमा मेरा खुट्टा फट्याएर चढायो । दाहिने हातले लाडोलाई पुतीको मुखमा राख्यो । मैले उसलाई भनेँ, 'अस्ति लगाएको जस्तो लगाउनु पर्दैन ? यत्तिकै नगर्नु, बच्चा बस्छ ।' तर उसले आफूसँग नभएकोले आज यत्तिकै गरौं भन्यो । डराउँदै मैले भनेँ, 'त्यसो भए त नाई । ''केही हुँदैन म माल बाहिरै झार्छु, भित्र झारे पो बच्चा बस्छ त ।' उसले भन्यो । मैले उसलाई मनाउन प्रयास गरेँ तर सकिनँ । 'सबै जिम्मा म लिउँला भएन र ?' उसले लाडो भित्र ठेल्दै भन्यो ।